‘IndoChine Cup၊ ရန်ကုန်မေလ ၂၆ ရက်’ – IndoChine Cup, Yangon May 26th 2018 | THE MYANMAR AND BRITAIN ASSOCIATION
‘IndoChine Cup၊ ရန်ကုန်မေလ ၂၆ ရက်’ – IndoChine Cup, Yangon May 26th 2018
‘IndoChine Cup၊ ရန်ကုန်မေလ ၂၆ ရက်’
ဒီနှစ်မှာတော့ စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ Indochine Cup ကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ရာသီဥတုကောင်းမွန်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော ရပ်ဘီနှင့် ထိတွေ့ ချိန်ပိုသို့သွားသည်။ ရန်ကုန် Dragons နှစ်ဦးစလုံးသည် ထိတွေ့မှုနှင့် ဆက်သွယ်မှုဂိမ်းများကို ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ထိတွေ့အသင်းသည် သူတို့ကိုယ်တိုင် ကစားခဲ့ကြပြီး လျှပ်တစ်ပြက်နှင့် အတူ ပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Conyat Create၊ Forever Group၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ SOS၊ Sanctuary Ananda၊ Valentis၊ YOMA Land Home Rentals, Zen Research Myanmar နှင့် RJE တို့ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အနည်းဆုံးတော့ ထိုကဲ့သို့ ကြီးမားသော ပွဲတော်ကို ပြုလုပ်ရန် Star-City အသင်းနှင့် RJE ၀န်ထမ်းများအား သူတို့၏အချိန်ကို စေတနာ့ ၀န်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ပေးသည်ကို Dragons ကော်မတီမှ အထူးပင် ကျေးဇူးရှိတင်ပါသည်။ အသင်းအားလုံးသည် ပျော်စရာကောင်းသော နေ့ တစ်ရက်လို့ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤသည်ကျိန်းသေပိုကြီးပြီးပိုကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲများအတွက်စံသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
IndoChine Cup, Yangon May 26th 2018
This year sawafantastic Indochine Cup. Great weather, exciting Rugby, the touch going into overtime. Both Yangon Dragons cleaned up the touch and contact games, and Myanmar’s first touch team out played themselves and will be back withabang. Thank you to all the partners; Conyat Create, Forever Group, International SOS, Sanctuary Ananda, Valentis, YOMA Land Home Rentals, Zen Research Myanmar and RJE.
Last but not least,aspecial thank you to the Dragons committee, who went above and beyond to put on suchagreat event, as well as the Star City team, and the RJE staff for volunteering their time etc. We hope all the teams had an enjoyable and memorable day. This has definitely set the standard for bigger and better tournaments.